I-GPS056D -I-OMG yeQhosha leQhosha le-SOS engxamisekileyo ye-GPS Tracker yabantu abadala ngeDementia-iZisombululo ze-OMG
I-GPS056D -I-OMG yePanic Button SOS ye-GPS Tracker yabantu abadala ngeDementia
4G Unxibelelwano - Inkxaso yeebhendi ezahlukeneyo ze-4G, iya kubuyela kwi-3G / 2G xa kungekho kugubungela i-4G.
Ukushaja ngaphandle kwentambo -Itshaja yeQI ibonelela ngokutshaja ngokukhawuleza kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Isiseko sokutshaja (Kubandakanyiwe) -Uyishiya nje eyakho IGPS056D kwisiseko sokutshaja kwaye uhambe.
I-SOS Alarm -Iyithumela i-alamu ye-SOS ngexesha lokwenyani kunye neenkcukacha zeendawo ezipheleleyo zefowuni ukuba umntu osengozini ucinezela iqhosha le-SOS / panic. ☆ Ukunyanzelwa lilizwi kukwazise ixesha kunye nenqanaba lesixhobo sakho, Ex: ialam yakho yenziwe yasebenza. Ukutsalela umnxeba kwinombolo yoqhakamshelwano 1. Ngoku lixesha 11:45.
Ukufowuna ngeendlela ezimbini -Sebenzisa iindlela ezimbini zokufowuna ukubiza abantu obathandayo nangaliphi na ixesha, banokude bakubize ngomnwe weqhosha.
Ukufumanisa ukuwa kwealam Yaziswa ukuba kungenzeka ukuwa okanye ukungqubana kwenzeke. Izilumkiso ezikhawulezayo zikuvumela ukuba usabele ngokukhawuleza.
Cwangcisa iiGeofence kunye nezilumkiso Cwangcisa i-Geofences ezininzi kwaye ufumane izilumkiso njengoko isixhobo singena okanye siphuma kwindawo ethile.
4 Ukufumana iTeknoloji -Ukulandelwa kwexesha lokwenyani, ukuya kuthi ga kubuchwephesha bendawo ye-4: iGPS, iWIFI, iBluetooth kunye neLBS.
I-GPS -INkxaso ye-GPS encediswayo isebenza isebenzisa inethiwekhi yesathelayithi ukukhawuleza ichonge indawo okuyo. Ngokukhawuleza kune-GPS yesiqhelo, i-A-GPS isebenza ngokukhawuleza, okuthetha ukuba uncedo lufika kuwe ngokukhawuleza. ☆ Ukunxiba okungangeni manzi kwishawari- Wela eshaweni- Fumana uncedo kwangoko.
Akukho shukumiso kunye nokuchongwa kwesindululo Inzwa eshukumayo isebenzisa iitekhnoloji ezininzi ukubona intshukumo okanye akukho ntshukumo. Ukuba isivamvo senziwe, ialam iyathunyelwa kumntu oqhagamshelana naye okanye kwiziko lokubeka esweni kwangoko.
Unxibelelwano lweBluetooth 5.0 - Qhagamshela kwisiseko sakho sokutshaja sokufumana indawo yangaphakathi.
Usebenza njani umtshina wokuwa
Isixhobo sokufumanisa ukuwa siqulathe inzwa yesantya se3D esilinganisa iintshukumo kuwo onke amacala. Nje ukuba isixhobo sibhaqe ukuwa sithumela umyalezo obhaliweyo ukuya kuthi ga kwiinombolo ezilishumi zefowuni esazisa ukuba kukho imeko kaxakeka kwaye ngokuzenzekelayo ucofa inombolo yokuqala egciniweyo. Ukuba le fowuni ayiphendulwa, iya kukhetha ngokuzenzekelayo inombolo elandelayo njalo njalo. Ukuba akukho mntu uthabathayo, umtshinari uyayiphinda le nkqubo emva kwemizuzu emi-5 ade umntu aphendule okanye acofe iqhosha le-SOS .. Nje ukuba umntu athabathe enye yeenombolo zefowuni, ungathetha ngokwesiqhelo kumtshini, njengakwiselfowuni eqhelekileyo. Ukufunyanwa kokuwa kunokucinywa. Isixhobo sibona ukuwa ngokusekwe kwiindlela ezininzi. Irejista impembelelo isebenzisa i-engile yokudipha emva kokuba ikwindawo ethe tyaba imizuzwana eli-10. Ukufunyanwa kokudityaniswa ngokudibeneyo kunamanqanaba ali-9 ovakalelo onokuthi ukhethe ukukhusela ii-alamu zobuxoki.
62mm 47.5mm * * 18mm
Ukufikelela kwiiyure ze-120
Ikhadi leNano SIM
I-802.11 b / g / n, 2.4G
intshukumo kunye neshukumisi sokungcangcazela
1787 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-3 Namhlanje